dagaalk adag oo dhacay Badhaadhe Badhaadhe(WNT)-Dagaal xooggan oo khasaare keenya ayaa ka dhacay Degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubada Hoose, waxaana dagaalka dhex maray ururka Al-shabaab iyo ciidamada dawlada oo gacan ka helaya kuwa Kenya. Dagaalka ayaa bilowday kamarkii ciidamada ururka Al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada kenya iyo kuwa dawladu ay ku lahaayeen Degmada Badhaadhe oo horay looga qabsaday ururka Al-shabaab.
Dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa wararka ka soo baxayaa waxay sheegayaan in laysu adeegasaday hubka noocyadiisa kala duwan ,iyadoo wararku intaasi ku darayaan in dad shacab ahi dhibaato ka soo gaartay.
Ciidamdamada dawlada ayaa qiray in saldhigyadooda lagu soo qaaday dagaal,hase ahaatee waxaa uu ka gaabsday inta khasaruhu leegyahay,waxaase uu ku soo koobay inay iska difaaceen ururka Al-shabaab,deegaanadii ay ka soo duuleena ay qabsadeen. Dhinacodana ururka Al-shabaab ayaa ku faanay in dagaalkii ay soo qaadeen qorshihii ay ka lahaayeen u hirgalay,waxana ay intaasi ku dareen inay laayeen ciidamadii halkaasi ku sugnaa,iyadoo weliba hubkii ka qaatay.
Deegaanka Badhaadhe iyo guud ahaan gobollada Jubbooyinka oo horay looga qabsaday ururka Al-shabaab,ayaa dagaalkoodu daba dheeraaday,waxaana arintaani lagu tilmaamay gobolka oo ah hawd ah iyo ururka Al-shabaab oo dagaalkooda dhuumasho u badalay.